Friday, 05 January 2018 22:41
Rakkoo biyyattii mudate furuuf murteewwan ADWUIn darban
Koreen raawwachiistuu hojii ADWUI walga'ii Mudde 3 bara 2010 irraa eegalee guyyoota 17f geggeeffateen rakkoolee gama misoomaa, hawaas-dinagdeefi siyaasaatiin biyyattii mudatan furuurratti xiyyeeffatee mari'ateera.
Kanumarratti hundaa'uunis rakkooleen siyaasaa mul’achaa jiran kallattii hundumaan sadarkaa yaaddessaarra waan gahaniif, waliigalteedhaan murtoowwan sirriin walga'icharratti darbuusaanii ilaalchisuun ittigaafatamtootni dhaabbilee biyyaalessaa afrani Roobii darbe ibsa wajjummaa kennaniiru.
Dura taa'aan Sochii Dimokraasummaa Ummatoota Itoophiyaa Kibbaa /Adda Warraaqsa Ummatoota Itoophiyaa (SDUIKfi ADWUI)fi Obbo Hayilamaariyam Dassaalany akka ibsanitti, waltajjii marii koree raawwachiistuun hojii guyyoota 17f adeemsifameen, rakkoolee samii gaditti biyyattii mudachaa jiran hundumaa furuuf marii bal’aafi gadi fagoo taasifameen waliigalteerra gahuun danda’ameera.
Kunis, maddi rakkoolee eessa akka ta’an adda baafachuuf marii, falmiifi gamaggamni taasifamuusaa ibsaniiru. Maddisaa, walshakkii, walamantaa dhabuufi waljibbuu ta’uus kan hubatame yoo ta’u, kana ammoo walitti dhiyeenyaan furuuf waliigalteerra gahuusaanii addeessaniiru.
Seenaa Itoophiyaan dabarsite keessatti biyya hiyyummaafi doofummaan beekamaa turte, har’a ammoo jijjiiramuun misooma itti fufiinsa qabu keessa galtee akka jirtu kan eeran ministirri muummichaa, kunis imala haaromsaa keessa gallee akka jirru kan argisiisuudha.
Wayita ammaa garuu rakkoo hamaa mudate osoo hinfuriin darbuurraan kan ka’e dhimmi jiraachuufi jiraachuu dhabuu biyyattii rakkoo hamaafi sodaachisaa keessa galcheera. Kanarraa ka’uun waltajjii marii koreen raawwachiistuu hojii tibbana gaggeessaa turerraa bu’aan eegamu argamuusaa ibsaniiru.
Dura taa'aan Sochii Dimokiraasummaa Saba Amaaraa, Obbo Dammaqaa Mokonnoon gamasaaniin akka jedhanitti, ADWUIn kanaan dura waltajjii qorannaa hojii adeemsifataa turerraa kan ammaa gama hundaan adda.
Dura taa'aan DhDUO, Obbo Lammaa Magarsaas akka dubbatanitti, waggoota kurnan lamaan darbanitti ADWUIn dhaaba sochiilee misooma kallattii hundumaan haala itti fufiinsa qabuun dhugoomsuu danda’eedha.
Hanguma gama misoomaatiin milkaa’e dogoggorootni hedduunis mudachuu eeranii, kunis keessumaa waggoota lamaan darbanitti rakkooleen siyaasa biyyattii daran akka hammaatu ta'eera jedhu.
Rakkoo kana akka dhaaba ittigaafatamummaa qabu tokkootti furuuf guyyoota kudhanii oliif mariin gaggeeffameera; ija shakkiin walilaaluufi walamantaa dhabuun bu’uurarraa furmaata akka argatan gochuun danda’amuusaa ibsaniiru.
Kunis, jalqabumaa eegalee rakkoolee jiran mara furuuf kutannoon kan seename ta'uu eeranii, kanarraa ka’uun dhimmoota wayitii biyyattiin keessa jirturratti kan mari'atame yoo ta’u, biyya milkaa’ina hawaas-dinagdeerra jirturratti rakkoon siyaasaa mudachuun bu’aawwan argaman kan dukkaneessu ta’uun ilaalameeraa jedhu. Kanaaf ammoo paartiin olaantummaan biyyattii gaggeessaa jiru murteewwan sirrii dabarsuun furuu akka qabu waliigalteerra ga'amuusaa ibsaniiru.
Dura taa'aan ABUT Doktar Dabratsiyoon Gabramikaa’elis akka jedhanitti, miseensotni raawwachiistuu hojii ADWUI wayita gamaggamaatti seenan, rakkoolee mudatan mara furuuf kutannoodhaan kan jalqabaniifi murteewwan darbanis jijjiirama kan fidaniidha. Murteewwan darban kanneenis hojiitti hiikuuf lammiileen martuu itti gaafatamummaa isaanii bahachuu akka qabanis yaadachiisaniiru.
Gama biraatiin Ministirri Muummee Hayilamaariyam Dassaalanyi ibsa kennaniin, hoggantootni paartiilee siyaasaafi gaazexeessotootni sababa ejjennoo siyaasaa qabaniin mana hidhaa keessa turan bilisaan kan gadi lakkifaman ta'uufi kaayyoonsaas waliigaltee biyyaalessaa uumuufi dirree dimokiraasii bal'isuuf kan gargaaru ta’uusaa ibsaniiru.
Bara Dargiirraa kaasee maqaa qorannoo yakkaatiin mana sirreessaa guddicha (Maa’ikalaawwii) jedhamuun tajaajilaa ture cufamuun godambaa akka ta’u murtaa’uusaa kan himan ministirri muummichaa, kunis, maqaa qorannootiin gochootni badaa ta’an wiirticha keessatti lammiilee sababoota adda addaatiin hidhamanirratti akkaataa mirga namummaasaanii tuquun raawwatamaa waan tureef, cufamuunsaa tarkaanfii guddaadha jedhaniiru.
Friday, 05 January 2018 22:31
Gumaacha atileet Waamii Birraatuuf moggaasni daandii taasifame
Ummatni Itoophiyaa atileeti Waamii Birraatuu bifaan wallaaluus gumaacha inni biyyattiif buuserraan kan ka'e maqaa isaanitiin kan beeku baay'eedha. Keessumattuu, hawaasni magaalaa Finfinnee hedduunsaanii kan beekan ta'uutu himama.
Tibbana dhaloonni boruu akka isaan hindaganneef mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti daandiin Adaamaarraa gara Wanjii geessu maqaasaaniitiin moggaafameera. Kunimmoo umriisaanii guutuu guddina ispoortii atileetiksii Itoophiyaaf hojii gaarii hojjechuusaanii mul'isa jechuudha.
Atileetonni Waamiin leenjise, beekamummaa ispoortii atileetiksii argatanis hedduudha. Kunimmoo atileeti Waamiin guddina ispoortii atileetiksiif gumaachaa guddaa waan taasisaniif, yeroo kamiyyuu fakkeenyummaan akka waamaman godheera. Kana waliinis dandeettiin hojiisaanii daran kan dinqisiifamu ta'uusaa namootni caalaatti isaan beekan dubbatu.
Ispoortiiwwan aadaa keessaa taphoota korboo(giingoo), qillee (kollee), waldhaansoofi gulufa Fardaan beekamaa akka turan ilmisaanii Obbo Jaagamaa Waamii dubbataniiru. Bara 1944 gara magaalaa Finfinnee dhufuusaanii kan ibsan Obbo Jaagamaan, Raayyaa Ittisaa keessatti Shaalaqaa 33fafi Shaambalii 3fatti loltummaadhaaf mindeeffamanii akka turanis himaniiru.
Baruma sana keessa dorgommiin ispoortii atileetiksii sadarkaa shambaliitti waan jalqabameef, Waamiinis yoosuma carraa argachuu akka danda'anillee ibsaniiru. Atileeti Waamii Birraatuu yeroo dorgomaa turanitti injifannoowan boonsaa waan galmeessisaa turaniif, midiyaalee hedduun seenaasaanii barreessuun gabaasaa akka turanis yaadatu.
Haala kanaan dorgommii maraatonii, walakkaa maraatonii,fiigicha meetira kuma shaniifi kuma kudhaniin injifachuudhaan qabxii olaanaa galmeessaniiru. Akkasumas dorgommii tarkaanfii fageenya adda addaa biyya keenyatti kan jalqabeefi sadarkaa har'aarra akka ga'uuf gumaacha olaanaa kan taasisan Waamii ta'uu seenaasaanii wabeeffachuun dubbatu. Kanaanis meedaaliyaawwan 300 biyyaaf argamsiisuu kan danda'an yoo ta'u, badhaasa gaachanaafi eeboo shaniifi waancaawwan 22 ammoo dhuunfaadhaan badhaafamaniiru.
Guddina ispoortii atileetiksii biyyattiif ga'ee olaanaa kan taphachaa turan atileetiin kun jiruufi jireenyasaanii keessatti hojiiwwan gaarii hojjechuudhaan dhaloota har'aaf fakkeenya guddaa ta'aniiru. Kunimmoo dhaabilee ispoortii biyya keessaafi alaatiin beekamtii argachuun akka badhaafaman isaan taasiseera. Baruma 2009 keessallee Yunivarsiitiin Riifti Vaaliirraa doktireetii kabajaa argataniiru.
Atileeti Waamiin wayita ammaa manguddoo umrii 100 yoo ta'an, Amajjii 11 bara 2010 waggaa 101fa isaanii kabajachuuf qophiirratti akka argamanis ibsa Obbo Jaagamaarraa hubatameera.
Friday, 05 January 2018 22:29
Federeeshinichi atileetota ciccimoo filatee leenjisuufi
Gosoota atileetiksii adda addaatiin dargaggoota ciccimoo filachuun leenjisuuf ji'a Amajjii keessa shaampiyoonaan atileetiksii magaalaa Finfinnee qophaa'uusaa Federeeshiniin Atileetiksi Itoophiyaa beeksise.
Ittigaafatamaan kutaa kominikeeshiniifi qunnamtii ummataa federeeshinichaa, Obbo Silashii Bisiraat Roobii darbe ibsa kennaniin akka jedhanitti, kaayyoon dorgommichaa dargaggoota ciccimmoo dorgommii kanarraa argaman filuudhaan waggoota lamaaf leenjii atileetiksi akka argatan gochuufi.
Dorgommiin kan adeemsifamu korniyaa lameeniinuu, dhiiraafi dubaraan guyyoota shaniif Amajjii 23 –28 bara 2010tti Istaadiyooma Finfinneetti fiigichoota gabaabaa, giddu galaa, tarkaanfii, utaalchaafi darbanaa dabalatee akka adeemsifamus hubachiiseera.
Atileetoonni dorgommii kanarratti hirmaachuudhaan tokkoffaadhaa hanga sadaffaa ba'an badhaasa maallaqaas ni argatu kan jedhan Obbo Silashiin, tokkoffaa kan ba'an qarshii kuma shan, lammaffaan kuma afuriifi 500, sadaffaan ammoo kuma sadii akka badhaafaman ibsaniiru.
Friday, 05 January 2018 22:25
Friday, 05 January 2018 22:23
Walitti bu'iinsi kamiyyuu mariifi araara buusuudhaan furama
Maatiin, ollaan, naannoofi biyyoonni sababoota adda addaatiin walitti bu'uu malu. Walitti bu'iinsi kamiyyuu faruu mariifi araara buusuudhaan furamuu danda'a. Jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantiifi abbootiin gadaa walitti bu'iinsa uumame kamiyyuu mariidhaan furuun araara buusuudhaan beekamu.
Maanguddoonni kunneen dhugaafi haqaan waan hojjetaniifi hawaasa biratti kabaja olaanaa waan qabaniif gorsisaanii lafa hinbu'u. Mootummaanis walitti bu'iinsa hawaasaafi hawaasa, naannoofi naannoo biyyaafi biyya gidduutti sababii kimiiniyyuu uumame karaa nagaafi mariidhaan furuu keessatti gahee olaanaa qaba.
Sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaa gidduutti ji'oota muraasa dura uumameen lammiilee hedduun lubbuu dhabaniiru, qaamnisaanii hir'ateera, qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru, qabeenyi isaaniis barbadaa'eera. Sababa rakkoo kanaatiin manneen barnootaafi yuunivarsitiiwwan biyyattii hedduu keessatti hojiin baruu barsiisuu yeroof akka gufatu ta'ee ture.
Walitti bu'iinsa daangaa naannolee lameen gidduutti uumame kun mariidhaan fuuruun araara (nageenya) buusuun dhimma yeroon kennamuuf miti.
Bataskaanni Kaatolikii Itoophiyaa Yaa'ii Idilee 34fa tibbana adeemsifteen mootummaan walitti bu'iinsa naannawawwan biyyattii adda addaatti uumame karaa nagaatiin furuun araara buusuu akka qabuufi abbootiin amantiis loogii tokko malee olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf sagaleesaanii dhageessisuu akka qaban waamicha dhiyeessiteetti.
Phaaphaasiin bataskaanattii, Abuna Birhaanayasuus haala nageenyaa Itoophiyaa yeyoorratti ibsa kennaniin akka jedhanitti, walitti bu'iinsi naannawawwan biyyattii adda addaatti uumame tokkummaa ummataa balaa guddaarra waan buusuuf mootummaan nageenya mirkaneessuuf ittigaafatamummaa qaba.
Qaamoleen mootummaas adda addummaa kamiyyuu duubatti dhiisuun ummataafi biyyattii balaa irraa baraaruuf hojjechuu akka qabaniifi adda addummaa keessoo yoo qabaatanillee amala walitti bu'iinsaa qabatee ummata bira akka hingeenyeef of eeggannoo cimaa taasisuu akka qaban yaadachiisaniiru.
Qaamoleen mootummaa garaa garummaa kamiyyuu mariidhaan hiikuuf waltajjii marii qopheessuudhaan biyyattii kufaatiirraa, ummata ammoo du'aafi godaansarraa baraaruu akka qaban kan yaadachiisan phaaphaasichi, gaaffiiwwan yeroofi seeraan keessummeessuu dhabuudhaan balaan lubbuu namaa irra ga'u, dirreewwan ispoortii bakka jeequmsaa ta'uufi dhaabbileen barnootaa wiirtuu jeequmsaa, lubbuun lammiilee itti darbuufi qabeenyi itti barbadaa'u ta'uun kan nama gaddisiisuudha.
Keessumaa lubbuun namaa maaliin iyyuu hinmadaalamne sababa jeequmsaatiin darbuunsaa tasumaa fudhatama kan hinqabne ta'uu ibsaniiru.
Abbootiin amantiis meeshaa nageenyaafi araaraa ta'uudhaan naannawa isaaniittis ta'e sadarkaa biyyaatti sagaleesaanii dhageessisuudhaan olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf, mirgi namaa akka kabajamuuf, sodaa tokko malee humnoota farra nageenyaa balaaleffachuu qabu jedhaniiru.
Qaamoleen hawaasaafi mootummaa adda addaas loogiifi sodaa tokko malee kan balaaleffatamuu qabu ifachuudhaan, kan dhiifama gaaafachuun irra jiru akka gaafatu, kan dhiifama gochuu qabu akka dhiisuuf araarri haqa bu'uureffate akka bu'uuf ittigaafatamummaa irraa eegamu bahaachuu akka qaban yaadachiisaniiru.
Farreen nageenyaa qaawwa uumametti fayyadamuudhaan afaaniifi hidda sanyii hordofanii ummata walitti buusuuf socho'an mootummaan utuu isaan rakkoo kanaa olii ummata irratti hinqaqqabsiisin ogummaadhaan tokkummaa ummataa eeguu akka qabus hubachiisaniiru.
Walumaagalatti, walitti bu'iinsi akka hinuumamneef dursanii hojjechuufi erga uumamee ammoo battalumatti mariifi haqa irratti hundaa'anii furmaata akka argatu taasisuun dhimma ijoo qaamoleen mootummaa, hawaasaa, abbootiin amantiifi Gadaa qindoominaan irratti hojjechuu qabaniidha.
Friday, 05 January 2018 22:21
Garaagarummaa qaban dhiphisanii waliin hojjechuun qaroomina
Biyya kamittuu paartiileen siyaasaa haa hafuutii namootni dhuunfaanuu ilaalcha walfakkaatu hinqaban. Garuu ilaalcha ofii qabatanii waan tokko nama taasisurratti waliin hojjechuun ammoo qaroomina.
Garaagarummaan ilaalchaa paartiilee morkattootaafi paartii biyya bulchu gidduutti uumamuun taatee addaa miti. Biyya keenya keessattis ilaalchi gama kanaan calaqqisu kanuma. Biyyattiin baroota dheeraaf sirna abbootii irreetiin bulaa turte. Sirni dimokraasii paartii hedduu keessummeessu eddii eegalees waggoota 27 hincaalu.
Ijaarsi sirna federaalizimii eegalame kun bu’aa ba’ii hedduu ce’eeti kan as ga’e. Adeemsa kana keessattis hirmaannaan paartiilee siyaasaa takka ol ka’aa takka ammoo gad bu’aa adeema.
Filannoon waliigalaa bara 2002 taasifame paartiilee hedduu hirmaachisus paartiileen morkattootaa ummata bakka bu’uun Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa seenaan hinturre.
Kunis guutummaatti paartii biyya bulchuun waan injifatamaniifi. Ta’us paartiileen morkattootaa filannoon taasifame haqa qabeessa miti yaada jedhuun injifatamuusaanii amananii hinfudhanne.
Gama kamiinuu dhimma biyyaa keessatti hirmaannaan paartiilee siyaasaa daran murteessaadha. Yaadni kun yaada biyyaa, paartii biyya bulchuufi hawaasa addunyaa ta’uunsaa hubatamuu qaba.
Kunis Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa paartii biyya bulchu qofaan dhuunfatamuunsaa ijaarsa sirna dimokraasii biyyattiin taasisaa jirtu haala barbaadameen dhugoomsuurratti dhiibbaa akka qabu yaadonni hawaasa biraa dhiyaachaa turaniiru.
Bu’uuruma kanaan hirmaannaa paartiilee morkattootaa cimsuuf sochiin taasifamaa jiru bu’aa qabeessa ta’aa jira. Kunis waliin hojjechuurratti haala falmii yookiin marii ilaalchisee yeroowwan gara garaatti erga yaadaan walrigaa turanii booda waliin mari’achuurratti waliif galaniiru.
Dhumarrattis ittigaafatamaan waajjira ADWUI, Obbo Shifarraa Shigguxee dhiyeenya kana paartiin biyya bulchu, paartiilee marii kanarraa boodatti deebi’an kamiinuu waliin marii taasisuuf fedhii guutuu akka qabu ibsuunsaanii ni yaadatama.
Dhimmi kun irra caalaatti paartii Madrakii Tokkummaa Federaalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaa (Madarak) waan ilaallatuuf ejjennoo paartichaa baruuf irratti ittigaafatamaa quunnamtii ummataa Obbo Xilaahuun Indashaawu gaafannee turre.
Akka isaan jedhanitti, paartiin biyya bulchu yaada ofii gad buuse malee yaada paartiilee morkattootaa fudhachuuf fedhii waan hinqabneef marii kana keessatti hirmaachuu hinbarbaadan.
Ta’us paartiin biyya bulchu yaada paartiilee morkattootaa qixa sirriin keessummeessuuf fedhii qabaachuusaa xalayaan isaan beeksifnaan kan hirmaatan ta’u. Garuu haala ammaa jiruun mariin taasifamuu eegale mariidha jedhanii kan fudhatan miti.
Egaa, “Namni mana tokko ijaaru citaa wal hinsaamumu,” jedhama mitiiree. Ilaalcha siyaasaatiin garaagarummaan jiraatuuf biyyi hojjechuufii yaadame tokko waan ta’eef xiyyeeffannaan irratti yaaduu gaafata.
Sochiin hirmaannaa paartiilee siyaasaa cimsuuf taasifamaa jiru akka jalqabaatti sochii egeree biyyaaf abdii uumuudha. Kunis paartiin ijaarameefi ilaalchi siyaasaa har’a jiru bor kufuufi diigamuunsaa waan hinoolle ta’us biyyi garuu bara baraan jiraata.
Hundaa ol garaagarummaa jiru dhiphisuun gara waan tokko nama taasisuutti dhufuun qaroomina. Ijaarsa sirna dimokraasii dagaagsuun alatti sirna paartii hedduu cimsuuf daran gargaara.
Friday, 05 January 2018 22:18
Friday, 05 January 2018 22:17
Friday, 05 January 2018 22:13
Barattootni Yunivarsiitii Arsii Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa daaw'atan
Yunivarsiitii Arsiitti barattootni ogummaa gaazexeessummaatiin waggaa 3fa barachaa jiran Roobii darbe Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa daaw'ataniiru.
Wayita daawwii taasisanittis hojiileen miidiyaa maxxansaa qabatamaatti maal akka fakkaatuufi barnoota tiyooriitiin barachaa turan waliin hangam walkkaatu hubachuu danda’aniiru.
Dhaabbatichis barattoota 22 yunivarsiiticharraa dhufan simachuun hojmaatni dhaabbatichaa imaammataafi qajeelfamootaa heera biyyattii waliin haala kamiin hojjetamaa akka jiru ibsuufii danda’eera.
Kanarraa ka’uun barattootni kunneen hubannoo miidiyaa maxxansaa caalatti kan gabbifatan ta’uu beekameera.
Torban kana/This_Week 43535
Guyyaa mara/All_Days 1468315